YEYINTNGE(CANADA): Friday, October 02
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ၆၄ နှစ်မြောက် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ၆၄ နှစ်မြောက် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကို စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့ က ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသော တော်လှန်ရေးသမား ဟောင်းကြီးများ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်လူငယ် များ၊ ၀ါရင့် နိုင်ငံရေးသမားများ၊ နိုင်ငံခြား သံတမန်များ တက်ရောက် ခဲ့ကြကြောင်း ကြားသိရ ပါသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/02/20090အကြံပြုခြင်း
Burma Advocacy Trips in Canada
Ottawa (Oct.2,09) –aleading Burma delegation comprised of Dr. Sein Win, Dr. Cynthia Maung, Charm Tong, K'nyaw Paw and Aung Than Wai arrived in Ottawa early this week to advocate Canada’s continued support for Burma. Representatives from Canadian Friends of Burma, Inter Pares, and Rights and Democracy accompanied the delegates in meeting withanumber of Canadian political leaders, ministers, Members of Parliament, Senators, and various government officials. For your info, please see below some important events and meetings taken place in recent days:
Proclamation of ‘Dr. Cynthia Maung Day’ at Vancouver City Council
Mayor Robertson proclaimed Tuesday, September 22, 2009, as “Dr. Cynthia Maung Day” in the
City of Vancouver and invited Saw Aung Than Wai, who was present on Dr. Maung’s behalf, to
receive the proclamation and sayafew words. The proclamation was immediately followed byareception in the foyer outside Council Chamber in honour of Dr. Cynthia Maung. Video:
Standing Ovation for Dr. Sein Win in the House of Commons
Dr. Sein Win receivedarare standing ovation on September 30 of all Members of Parliament including Prime Minister Stephen Harper and all his Cabinet members when House Speaker Peter Miliken announced “I draw to the attention of hon. members the presence in the gallery of Dr. Sein Win, Leader of the National Coalition Government of the Union of Burma.”
Minister Jason Kenny meets Burma delegates
Immigration and Citizenship Minister Jason Kenney met Dr. Sein Win, Dr. Cynthia Maung and other delegates in his Parliamentary Hill office on Sept. 29 noon. Hon. Deepak Obhrai, Parliamentary Secretary to Foreign Affairs also met the delegates on Oct.1.
Liberal Party Leader Michael Ignetieff meets Burma delegates
The Liberal Leader and main opposition leader Michael Ignetieff met Burma delegates at his office on Parliament Hill on Sept. 30 in the early evening.
NDP Leader Jack Layton meets Burma delegates
An opposition leader and New Democrat Party leader Jack Layton met Burma delegates in his office on Parliament Hill in the morning of Oct.1. NDP foreign affairs critic Paul Dewar first met the delegates on Sept. 28 and CIDA critic John Rafferty on Sept. 29.
75 Canadian Parliamentarian call for ‘Commission of Inquiry’ on Burma
On Sept.30 noonapress conference was held to make an announcement of unprecedented support from 75 Canadian Parliamentarians calling for the United Nations “Commission of Inquiry” on human rights situation in Burma. Along with some Burma delegates, MPs from all political parties participated including Senator Consiglio Di Nino (Conservative), Madam Francine Lalonde (Foreign Affairs critic, Bloc Quebecois), Paul Dewar (Foreign Affairs critic, NDP),and Iwin Cotler, former law professor and former minister of Justice (Liberal). The press conference was presided by the chair of Parliamentary Friends of Burma, Hon. Larry Bagnell.
Parliamentary Reception for Burma delegates
A reception was held at Commonwealth room on Parliament Hill in the evening of Sept. 30 by Parliamentary Friends of Burma (PFOB). Hon. Larry Bagnell presided the event that was attended by more than 100 MPs, Senators, parliamentary staffers, some government officials including House leader and an opposition party leader Jack Layton. Former Secretary of State – Asia/Pacific Hon. David Kilgour also hosted the first reception for the delegates in the evening of Sept. 27.
Testimony at Parliamentary Standing Committee on Foreign Affairs
Dr. Sein Win, Dr. Cyntha Maung and Cham Tong testified the situation in Burma in front of the Parliamentary Standing Committee on Foreign Affairs in the morning of Sept. 29; Mika Leveque from Rights and Democracy also testified along with them. The delegates also testified at Sub-committee on International Human Rights at noon.
Other various activities and meetings
The delegates have other numerous meetings and activities including meetings with foreign affairs officials on Sept. 28, CIDA officials on Sept. 30 and Oct. 1. They also attendedaBurmese community meeting on Sept. 29 andameeting with local health workers and professionals Oct. 1 and medical students Oct. 2.
They also met some prominent Senators including Senator Nancy Ruth on Sept. 29 and Senator Roméo A. Dallaire on Oct. 1.
Currently, the delegates are scheduled to attend ‘Burma Ethnic Conference’ at York University in Toronto on Oct.3, 2009.
-Reported by Canadian Friends of Burma
စာအုပ်ဟောင်းလေးတွေပါ။ မရသေးတဲ့လူ၊ မဖတ်ဖူးသေးတဲ့လူတွေ အလွယ်တကူ download လုပ်နိုင်အောင် ဖြန့်ဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ အချိန်ရရင် တခြားလူတွေကို ထပ်ဆင့် ဖြန့်ဝေပေးကြပါ။ ဗမာပြည်က အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲမှာ အထောက်အကူပြုဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်
Booklet Shwekhamauk 102
file get here
NUPA News Letter on Sept 28, 2009
၈၈၈၈ ပြည့်သူ့ သတင်းစဉ် ။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ ၊အတွဲ( ၄) ၊ အမှတ်( ၁)
2 Oct ဒိုင်ယာရီ
ဒီလိုရွေးကောက်ပွဲအတွက် တောခြောက်ပေး၊ ဘေးတီးပေးသူတွေအထဲမှာ တချို့က ဒီလိုလုပ်တာဟာ သူတို့ ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပါဘူး၊ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုမ၀င်ပါဘူးလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်အရ ဖြစ်စေ၊ သူတို့ရဲ့သုညနားကပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးဂုဏ်သိက္ခာအရပဲဖြစ်စေ၊ သူတို့ဟာ ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ချင်လို့လည်း ၀င်လို့မရပါဘူး။ သူတို့ဟာ ဒီနေ့ နအဖရဲ့ အဓိကရန်ဘက်စာရင်းမှာပါနေတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ဗကပ စတာတွေထဲမှာ ပါဖူးပါတယ်။ လက်နက်လည်းချဖူးကြပါတယ်။ ဒီတော့ “တခါလက်နက်ချဖူးရင် အကြိမ်ကြိမ်လက်နက်ချနေရတယ်” ဆိုတဲ့ လက်နက်ချတို့ရဲ့ အစဉ်အလာအတိုင်း မသေမချင်း တိုင်းပြည်မှာအရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စပေါ်လာတိုင်း စစ်အုပ်စုက လိုအပ်တယ်ဆိုရင် ထောက်ခံစာတွေ ရေးပေးနေရတာပါပဲ။ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ လူထုအပေါ်ဘာသြဇာမှမရှိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့က အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေနဲ့ သဘောတရားတွေထုတ်တတ်တော့ နအဖကိုလည်းဖားချင်၊ ဘာသဘောတရားအကြောင်းပြချက်နဲ့ ဖားရမှန်းမသိဖြစ်နေသူတွေအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ နောက်ပြီး နအဖကိုဖားချင်လို့ဖြစ်စေ၊ ပညာတတ်ဂိုက်ဖမ်းချင်လို့ဖြစ်စေ သူတို့ရေးတာတွေကို ဖော်ပြပေးနေတဲ့ မီဒီယာတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ရေးတာ၊ ပြောတာတွေဟာ တချို့လူတွေအတွက်တော့ အသုံး ၀င်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပဲ ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းက မြို့ပေါ်မှာနေသူတွေဆိုတော့ သူတို့ဟာ သူတို့နဲ့ပြိုင်ငြင်းလို့ မရမှန်းသိထားတဲ့အတိုင်း လူတကာကိုတိုက်ခိုက်တာ ဆွတာတွေလုပ်ကြပါတယ်။ တခါတလေမှာ သက်တော်ရှည် ဆရာ ဒဂုံတာရာကို သေဖော်ညှိတာလည်း လုပ်ကြပါတယ်။ ဆရာ့ခမျာ ဒင်းတို့မို့ပေကိုးဆိုပြီး မသိဟန်ဘဲ ဆောင်နေရဟန် တူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ခမျာ ဖားသာဖားရ မျက်မာန်ရှမှာကိုတော့ ကြောက်နေရတဲ့ လက္ခဏာတွေလည်း မြင်နေရပါတယ်။
နောက်တမျိုးက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်၊ ပညာတတ်လို့ ဆိုရမယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က မဝေးလှတဲ့ ကုန်လွန် လေပြီးတဲ့သမိုင်းမှာ ဗိုလ်ခင်ညွန့်နဲ့နီးစပ်၊ ပတ်သက်ဖူးတယ်လို့ နားလည်ရပါတယ်။ သူတို့က ငွေကြေးတတ်နိုင်တော့ ကိုယ်ပိုင်မီဒီယာလည်းရှိတယ်၊ ပြည်ပအဆက်အသွယ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ အန်ဂျီအိုကွန် ရက်တွေနဲ့လည်း ပတ်သက်နေကြပါတယ်။ သူတို့က ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်မယ့်လက္ခဏာတွေဖော်ပြနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငွေကြေးရှင်လည်းဖြစ်၊ ပညာတတ်လည်းဖြစ်ဆိုတော့ သူများလိုပြာပြာသလဲမဖြစ်၊ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပြောနိုင်၊ လှုပ်ရှား နိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့မှာက နအဖစစ်အုပ်စုထဲက ဘယ်ထိပ်သီးနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အရည်အသွေးမျိုးတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုဟာ ကင်းမှကင်းရဲ့လားလို့ တချို့က တွေး နေကြပါတယ်။ သူတို့ပြောတဲ့ သဘောတရားတွေမှာ နားယောင်စရာ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမယ့် သူတို့ဘာကြောင့် ဒီရွေးကောက် ပွဲကို ထောက်ခံပါဝင်ချင်ကြတယ် ဆိုတာကတော့ ရှင်းနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီလိုအမျိုးအစားတွေခွဲပြောပြီဆိုရင် တစညလို တပ်မတော်အရာရှိဟောင်းများကိုလည်း ချန်ထားလို့မဖြစ်ပါဘူး။ သူတို့ကိုချန်လှပ်လို့မရပေမယ့် သူတို့ရဲ့တွေးခေါ်နည်း၊ ပြောကြားချက်စတာတွေကတော့ လူတိုင်းအဖို့ဘာမှမဆန်း၊ ရှုပ်ထွေး စရာလည်းမရှိတာမို့ ဒီဆောင်းပါးထဲမှာ ချန်လှပ်ထားခဲ့ပါမယ်။ တစညပဲ၊ ဒီလိုပဲ ပြောတော့မပေါ့လို့သာ မှတ်ထားလိုက်ကြပါစို့။
ဒါ့အပြင် နောက်တမျိုးကတော့ လူသစ်တန်းလို့ပြောရင် ရမလားပါပဲ၊ သူတို့က ပိုခြေသွက်ပါတယ်။ ပိုပြီးမျက်နှာပြောင်တယ်လို့ ပြောရင်တောင်ရမလားပါပဲ။ တကယ်က သူတို့ထဲက တချို့ဟာ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံတုန်းက အဖွဲ့အစည်းတချို့မှာ တတိယတန်းခေါင်းဆောင်လောက်လုပ်ဖူးပြီး အခြေအနေဆိုးလာတော့ ထိုင်သွား၊ ငုပ်သွားသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ ရှစ်လေးလုံးခေါင်းဆောင်တွေအပေါ် အာဃာတတွေထားကြောင်း ဖော်ပြတာလည်း တခါတရံမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီအမျိုးအစားထဲမှာ သတိမပြုဘဲမနေနိုင်တဲ့ ဒွေးရောယှက်တင်ဖြစ်နေသူတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ကြံ့ဖွံ့လိုဟာ၊ သတင်းပေးလိုဟာတွေပါ ရောပါနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြခဲ့သူ အားလုံးထဲမှာ သူတို့ဟာ အပြတ်သားဆုံးလို့ တောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သူတို့က ဘာမှမကြောက်ဘူး ဆိုတာမျိုးလည်း ကြုံတိုင်းလိုလို ဖော်ပြကြပါတယ်။ အင်တာနက်မှာလည်းကျက်စား၊ သူတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုကြေညာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အပြတ်ကြော်ငြာနေကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူတို့က ပြည်ပမီဒီယာတွေထဲမှာ “စိမ်ခေါ်လို့ကတော့ တိမ်ပေါ်ကိုတောင်တက်ထိုးမယ်” ဆိုတာမျိုးကိုလည်း ပြောကြပါတယ်။ သူတို့ဦးတည်တာက နအဖဆန့်ကျင်သူ အားလုံးကို ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခါမှာ သူတို့ကို နအဖက လိုလားဟန်လည်းဖော်ပြနေတော့ သူတို့က ပိုကမ်းတက်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဒီ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြည်ပမှာဖော်ပြချက်တွေလည်း တိုးတိုးတဖုံ၊ ဗြောင်တမျိုး အမျိုးမျိုးပေါ်လာနေပါတယ်။ တချို့ကဆိုရင် “မောင်မောင်အခေါ်” စောင့်နေကြတာပါ။ ကြိုပြီး တိတ်တဆိတ် ဖျာခင်းတာတွေ လုပ်တယ်လို့လည်း ကြားနေရပါတယ်။ သူတို့က နိုင်ငံခြားပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့အဆိုအမိန့်တွေကို ကိုးကားပြီး ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးကို ချဉ်းကပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မရဲတရဲနဲ့ အချိန်မရွေးပြန်ဆုတ်လို့ရအောင် ပြောဆိုပြင်ဆင်နေကြတာလည်း သတိထားမိပါတယ်။ ကြည့်ရတာ သူတို့ဟာ နအဖရဲ့ကြိုးကိုင်ဒီမိုကရေစီရဲ့အရသာကို မြည်းစမ်းချင်ကြတဲ့ သဘောပါပဲ။ ကြိုးကိုင်ညင်သာရင် ပြည်တွင်းကကွင်းမှာကစားမယ်၊ ကြိုးကိုင်ကြမ်းရင်တော့ ပြည်ပမှာပဲနေမယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။ သူတို့အနေနဲ့ အန်အယ်လ်ဒီကို အပြစ်တင်တာဟာ မလုပ်မဖြစ်လုပ်ရတဲ့ ကြိုတင်လမ်းခင်းခြင်းလို့ဆိုရင် မမှားပါဘူး။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ၆၄ နှစ်မြောက် ဖက်ဆ...
၈၈၈၈ ပြည့်သူ့ သတင်းစဉ် ။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ ...